Trading Tools Suite - FXPRIMUS
Ka faa’iidayso moodhaladii u danbeeyey ee casriga ah si ay kor ugu qaadan khibradaada ganacsi, dhamaan si fudud ayaad uga heli kartaa adoo adeegsanaya barnaamijka MT4.
Ganacsatada FXPRIMUS ee cadadka maalgashiga kala duwan ayaa loo diyaariyay qalabyo ganacsi oo kala duwan, ka caawinaya inay gaaran go’aamo ganacsi oo cilmiyaysan
Helitaanka wararka maalinlaha ah, hababka maalgashi, lana soco xogaha abaalmarinada u danbeeyey adoo adeegsanaya barnaamijka MT4.
Isha ku hay qiimayaasha suuqa iyo boosaskaaga adigoon u baahan inuu barnaamijku kuu furnaado.
Ku ganacso hal gujo; xakamee lot size dalabyada cusub, samee stop loss, take-profit, ama trailing-stop
Faham janjeedhka guud ama jihada ganacsatada ee FXPRIMUS iyadoo loo eegayo halkii aalad kasta.
ka ganacso ilaa 130 aalado maaliyadeed hal gujo adoo isticmaalaya daaqad si fudud looga badali karo
CASHARO MUUQAAL AH
LASOO DAGID DHAKHSO LEH
AKHI HAGAHA ISTICMAALAHA
Dhibaato ma ku haysataa isticmaalka qalabkeenna? Emayl support@fxprimus.com